Xasan Sheekh “Afar sano ka hor meeshii aan uga tagnay ayey qadiyadda badda wali taagan tahay” - Awdinle Online
Xasan Sheekh “Afar sano ka hor meeshii aan uga tagnay ayey qadiyadda badda wali taagan tahay”
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta shir jaraa’id ku qabtay hoygiisa Muqdisho ayaa ka hadlay go’aankii Maxkamadda ICJ ay dib ugu dhigtay dacwaddii Badda ee u dhaxeysay Soomaaliya iyo Kenya.
Xasan Sheekh ayaa sheegay in qadiyadda Badda ay taagan tahay weli afar sano ka hor meeshii uu uga tagay xukunka, isagoo xusay in saddex jeer dib loo dhigay.
“Afar sano ka hor meeshii aan uga tagnay ayey qadiyadda badda taagan tahay sadax jeer ayaa qadiyadaas dib loo dhigay dowladeenu marwalba waxay noo sheegtaa inay diidaneyd in dib loo dhigo laakiin wax cadeynaayo inay dowladu diidaneyd marnaba shacabka lama wadaagin”ayuu yiri Xasan Sheekh.
Waxaa uu sheegay in saddexdii qarreen ee doorka ugu weyn ka qaatay kiiska badda la bedelay, isla markaana aanay dowladda sheegin cida lagu bedelay.
Xasan Sheekh ayaa sheegay inay dacwada Badda ay tahay mid Madaxweyne, isagoo xusay in dacwadaas aanay laheyn Wasiir iyo Ra’iisul Wasaare kuxigeen.
“Ra’iisul Wasaare kuxigeenka ka hadlaya ayaa maqlayaa, dacwadan Ra’iisul Wasaare kuxigeen ma lahan, Wasiir ma lahan, Madaxweyne leh, warqad Madaxweyne ayaa lagu geeyay dacwada, dadka wakiilka ka ah Warqad Madaxweyne ayaa lagu magacaabay, waxaa rajeynayaa oo niyad samida ku jirtay waxay aheyd Madaxweynaha inuu dadka hor-yimaado oo dadka u sheego waxa jira”ayuu yiri Xasan Sheekh.
Halkan hoose ka daawo shirka jaraa’idka:
Previous articleGobolka Waqooyi Bari oo Iska hor-imaad ku dhex-maray ciidamada Kenya iyo Al-Shabaab
Next articleQoraal ka dhan ah ciidamada Itoobiya oo ay soo saareen Xisbiyada mucaaradka Soomaaliya